गायिका इन्दिरा जोशीको सरप्राइज इन्गेजमेन्ट ! – Nepal Press
२०७८ असोज ८ गते ८:२०
काठमाडौं । गायिका इन्दिरा जोशीले केही महीना पहिले आफू सिंगल नरहेको खुलासा गरेकी थिइन् । उनले त्यतिबेलै आफू कसैसँगको प्रेममा रहेको बताएकी थिइन् ।
प्रेममा रहेको केही महीनामै इन्दिराको सरप्राइज इन्गेजमेन्ट भएको छ । प्रेमीले उनलाई सगरमाथा क्षेत्रको खुम्बुमा पुगेर इन्गेजमेन्ट औंठी लगाइदिएका छन् ।
फेसन डिजाइनर शरद केडियाले इन्दिरालाई खुम्बुमै इन्गेजमेन्ट रिङ लगाइदिएका छन् । सगरमाथा आधार शिविरमा बिहीवारदेखि सुरु भएको माउन्ट एभरेस्ट फेसन रनवेमा भाग लिन त्यहाँ पुगेका इन्दिरा र शरदबीच इन्गेजमेन्ट भएको हो ।
हेलिकोप्टरमार्फत त्यहाँ पुगेका उनीहरु अहिले खुम्बु क्षेत्रमै छन् । त्यही मौकामा शरदले इन्दिरालाई औंठी लगाइदिएको भिडिओ सार्वजनिक भएको हो । भिडिओमा शरदले घुँडा टेकेर इन्दिरालाई औंठी लगाइदिएका छन् भने इन्दिराले खुशि हुँदै स्वीकारेकी छिन् ।
पाइलट विवेकले भिडिओ सार्वजनिक गर्दै इन्दिरा र शरदलाई सुखद भविष्यको शुभकामना दिएका छन् । यी दुई जनाले केही महीनायता डेट गरिरहेपनि सार्वजनिकरुपमा प्रेमलाई स्वीकार गरिसकेका छैनन् ।
तर, गायिका जोशीले चाहिँ इन्गेजमेन्ट नभएर प्रेम प्रस्तावलाई स्वीकारेको दावी गरेकी छिन् । निकट स्रोतका अनुसार उनीहरु केही वर्षदेखि डेटिङमा छन् र केही महीना पहिले इन्दिराले आफू प्रेम सम्बन्ध रहेको भन्दै औंठी सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
प्रकाशित: २०७८ असोज ८ गते ८:२०
One thought on “गायिका इन्दिरा जोशीको सरप्राइज इन्गेजमेन्ट !”
DEVI PRASAD SUBEDI says:
गायिका इन्दिरा जोशीलाई सुखद दाम्पत्य जीवनको शुभकामना ।
‘डाँडाको बरपिपल’ फ्लप भए पनि शोभितकै निर्देशनमा बुढासुब्बाले नयाँ फिल्म बनाउने
विवेक ओवरोयलाई नेपाली फिल्ममा प्रस्ताव, दुबईमा भेटेपछि दीवाकरले भने : चाँडै गुड न्यूज आउँछ
यसवर्षको अस्कर अवार्डमा नेपालले भाग नलिने
शाहरुख खानको निवासमा एनसीबीको ‘छापा’
छोरा भेट्न जेल पुगे शाहरुख खान, अदालतद्वारा दोस्रोपटक धरौटीमा छाड्न अस्वीकार
थप तीन नेपाली फिल्मद्वारा रिलिज डेट घोषणा : ‘धुम’ र ‘चोरपुलिस’ तिहारमा आउने
दुबईमा प्रेमीसँग बिदा मनाउँदै वर्षा, भन्छिन् : एस, वि विल टुगेदर !
‘उचाइ’ फिल्म युनिट चामे पुग्यो, लुक्ला र नाम्चे सुटिङ इन्ड-क्ल्याप